TAARIIKHDA SOMALIYA | Ashaacira's Blog
← saxaafaddee la’aaminikaraa???
SAL U DHIGIDDI DIBIN DAABYADA UMADDA.
Halkaas waxaa ka dhashay 1960 dowlad ay hormood ka tahay SYL oo is huwan, oo caloosheeda ku wadata wax yaabihii qarxin lahaa oo dhan.
Sidii gumaystaha ugu talo galayba, dowladdii SYL waxay la kulantay marxalad adag, iyagii ayeyna gumeesatadu kala furfurtay. Dadwaynihii taageersanaa SYL waxaa la isaga horkeenay qabiil qabiil. Is qab qabsi xukun doonimo ku dhisan ayaa ka dhex dhashay. Halkaas SYL waxay ku waayeen kalsoonidii taageerayaal badan iyo gaar ahaan taageeradii culumaa’udiinka oo ahaa:-
· Kuwii waqtigii Sh. C/qaadir Sh. Sakhaawadiin iyo ka horba horumuudka u ahaa dhaqdhaqaaqa gumeysi diidka ahaa ee Soomaaliya;
· Xarigga isku xirayey dadweynihii halgamayey ee Soomaaliyeed iyo madaxdii SYL
· Waacidiintii iyo jihayntii shacabkii halgamayey.
In kastoo SYL is huwanayd, haddane waxaa ummadda Soomaaliyeed la socotaa in hoggaamintii ugu sarraysay ay gacanta ku dhigeen kuwii Talyaaniga camiliinta u ahaa; kuwaasoo midab Soomaaliyeed leh, sheeganayeyna inay muslimiin yihiin, isla markaana fulinaya barnaamijyadii gumeysatadu sida tooska ah u fulin waayeen.
Maxay samaysay dowladdaas is huwan oo garabka Talyaanigu ku xoogga badnaa:-
Waxay moora duug ku sameeyeen xaqiraad iyo jawr-fal taariikhdii iyo mudnaantii halgamayaasha Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan mudnaantii culumaa’uddiinka Ahlu-sunna Wal Jamaaca, ee muddada 1300-ka sano ka badan hormoodka u ahayd hoggaaminta iyo halganka ummadda.
2. Waxay burburin gaar ah u gaysteen caqiidada suuban ee diinta Islaamka iyagoo:-
· Abuurey dalkana soo geliyey bidcada Waahabiyada ah; una dhiibay xilal sar-sare ee wasaaradda garsoorka iyo caddaaladda si barnaamijkooda bidcaynta dalka u hirgalo.
· Diiday in Dastuurka dalku noqdo kitaabka Illaahay oo ah kii gumeysatada looga adkaaday, kuna beddelay dastuurkii gumeysatada Kirishtada.
· Saaxada ka saaray luqaddii Qur’aanka Kariimka ee Carabiga kuna beddelay luqaddii gumeysatada iyo kuwo kale; isla markaana dhulka ka hoos geliyey goobihii iyo barnaamijyadii diinteenna muqaddaska ah lagu horumarinayey.
Matalan ardayga dugsiga dhexe ka baxa ayaa agtooda ka tixgelin badnaa caalimka 50-ka sano iyo ka badan dadka barayey culuumta kala duwan ee diinta Islaamka.
· Adeegsaday xeelad kasta oo laysaga horkeeni karo culumaa’uddiinka, si ay u burburiyaan quwaddii diineed ee soo jireenka ahayd, iyagoo adeegsanaya qaacidadii macallimiintooda gumeystada ee qaybi oo xukun.
3. Waxay dhiirri-galiyeen dhaqan xumada bulshada iyagoo horumariyey goobihii iyo barnaamijyadii fisqiga.
4. Waxaa ku hoos macaluulay dalkaan barwaaqada ah dadkii Soomaaliyeed ee soo halgamay ee ku taamayey in mar uun la dhirgi doono.
5. Waxaa dhaqan aan lala yaabin balse lagu faano noqotay caddalad darrada, eexda, laaluushka, qabiilaysiga iwm.
6. Waxaa cirka isku shareertay nabadgelyadii muwadiniinta miyiga iyo magaalada.
7. Soomaaliya waxay noqotay meel aduunka looga yaqaan QABRIGII MUCAAWINADA.
Arrimahaas iyo kuwo ka sii murugo badan ayay dadka, dalka iyo diinta Islaamka iyo Ehelkeeda ku sugnaayeen muddo dheer. Jowr falkaan wuxuu noqday sababtii horseeday dhalashadii xukunkii militari ee dalka qabsaday 1969kii